Ayeyarwady Region Supreme Court - သတင်းများ
ပုသိမ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ယနေ့ နံနက် (၁၀း၃၀) တွင် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးဝင်းမြင့်က ကြန့်ကြာမှုများ နှင့် အထူးတရားရုံးများဖြင့် စစ်ဆေးသည့်အမှုများအား ဦးစားပေး၍ အမြန်ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ တိုင်းဒေသကြီးတရားရေးဦးစီးမှူး ဒေါ်ထွေးထွေး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်စိုးညွန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်ချိုထက် နှင့် ခရိုင်/မြို့နယ် တရားရုံးများမှ တရားသူကြီးများ စုစုပေါင်း (၃၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ မှ စတင်၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (CMP) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကြံခင်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ မြန်အောင် မြို့နယ်တရားရုံး နှင့် အင်္ဂပူမြို့နယ်တရားရုံးတို့တွင် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း မိမိရုံးများအား စီမံခန့်ခွဲ‌ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ တင်ပြသည့် အစည်းအဝေးနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ကြေးငွေနှင့် ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ (၂၂) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပွဲ
Copyright © 2022 High Court of Ayeyarwady Region. All Rights Reserved.
Email : ayeyarwady.hc@mptmail.net.mm